သီတဂူဆရာတော် အရှင်ညဏိဿရ | မေတ္တာရိပ်
၀ိပါက်တော် (၁၂) ပါး →
သီတဂူဆရာတော် အရှင်ညဏိဿရ	Posted on August 29, 2009	by mettayate ဗူဒ္ဓ၀ါဒ အခြေခံတရားတော်
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပြန်လည်ဝတ်ခံစားရသည့် ဝတ်တော် ၁၂ ပါး တရားတော်များ
အပိုင်း (၁) – နိဒါန်း
အပိုင်း (၂) – ပထမ ၀တ်တော်။
အပိုင်း (၃) – ဒုတိယ ၀တ်တော်။
အပိုင်း (၄) – ဒုတိယ ၀တ်တော်အဆက်။
အပိုင်း (၅) – တတိယ ၀တ်တော် နှင့် စတုတ္ထ၀ိတ်တော်။
အပိုင်း (၆) – ပဉ္စ၀ိပါက်တော်။
အပိုင်း (၇) – ဆဋ္ဌမ၀ိပါက်တော်၊ သတ္တမ၀ိပါက်တော်နှင့် အဋ္ဌမ၀ိပါက်တော်။
အပိုင်း (၈) – န၀မ၀ိပါက်တော်၊
အပိုင်း (၉) – ဒဿမ၀ိပါက်တော်၊ ဧကာဒဿမ၀ိပါက်တော်။
ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ် နှင့် ဓမ္မဖြစ်စဉ်
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်၊ ပါဠိတော်အနက်
http://www.dhammaweb.net/dhammadb/ မှ ကူးယူလှူဒါန်းပါသည်။
This entry was posted in တရားတော်များ and tagged သီတဂူဆရာတော် အရှင်ညဏိဿရ. Bookmark the permalink.	← အရှင်ဆန္ဒာဓိက